1. Difaaca xogta jaleeco
Macluumaadka soo socdaa wuxuu bixinayaa aragti guud oo fudud oo ku saabsan waxa ku dhacaya xogtaada shakhsi ahaaneed markaad booqato degelkeenna. Xogta shaqsiyeed waa dhammaan macluumaadka shaqsiyan lagugu aqoonsan karo. Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mawduuca ilaalinta xogta bayaankeenna ilaalinta xogta ee ka hooseeya qoraalkan.
Dhinaca kale, xogtaada ayaa la uruuriyaa markaad na siiso. Tani waxay noqon kartaa, tusaale ahaan, xogta aad geliso foomka xiriirka. Xogta kale waxaa si otomaatig ah u duubaya nidaamyadeenna IT-ga markii aad booqato websaydhka. Tani badanaa waa xog farsamo (tusaale, biraawsarka internetka, nidaamka hawlgalka ama waqtiga bogga la daawaday). Xogtan waxaa si otomaatig ah loo ururiyaa isla marka aad gasho degelkeenna.
Qaar ka mid ah xogta ayaa la uruuriyaa si loo hubiyo in websaydhku aanu khalad ka jirin. Xog kale ayaa loo isticmaali karaa in lagu falanqeeyo dabeecadahaaga isticmaale.
Maxay yihiin xuquuqdaada marka loo eego xogtaada?
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaad ku saabsan asalka, qaataha iyo ujeedka xogtaada shaqsiga ah ee aad kaydisay bilaash wakhti kasta. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato sixitaanka, xannibaadda ama tirtirka xogtaan. Waxaad nala soo xiriiri kartaa waqti kasta cinwaanka lagu siiyay ogeysiiska sharciga ah haddii aad wax su'aalo dheeraad ah ka qabtid ilaalinta xogta. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad dacwad ka gudbiso hey'adda kormeerka ee awooda u leh.
Markaad booqato degelkeenna, habdhaqankaaga baafinta ayaa lagu qiimeyn karaa tiro ahaan. Tan waxaa badanaa lagu sameeyaa buskudka iyo barnaamijyada loogu yeero falanqaynta. Dhaqankaaga dabaasha waxaa badanaa lagu falanqeeyaa si qarsoodi ah; Dhaqanka duufaanka laguma soo celin karo adiga. Waad diidi kartaa falanqeyntan ama waad ka hortagi kartaa adiga oo aan isticmaalin qalab gaar ah. Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo arrintan ku saabsan bayaanka ilaalinta macluumaadka soo socda. Waad diidi kartaa falanqeyntan. Waxaan kugula socodsiin doonaa fursadaha diidmada ee bayaanka ilaalinta macluumaadka.
2. Xog guud iyo macluumaad qasab ah
Hawl wadeenada degelkan waxay si dhab ah u dhawrayaan ilaalinta macluumaadkaaga shaqsiyeed. Waxaan ula dhaqmeynaa xogtaada shaqsiyeed si qarsoodi ah oo waafaqsan sharciga qawaaniinta ilaalinta xogta iyo bayaanka ilaalinta macluumaadka. Markaad isticmaaleyso degelkan, waxaa la aruurinayaa xog shaqsiyadeed oo kala duwan. Xogta shaqsiyeed waa xog lagu aqoonsan karo shaqsi ahaan. Bayaankaan ilaalinta xogta wuxuu sharaxayaa xogta aan aruurino iyo waxa aan u isticmaalno. Waxay kaloo sharraxeysaa sida iyo ujeeddada tan loo sameeyay. Waxaan farta ku fiiqnay in xogta la isugu gudbiyo internetka (tusaale ahaan markii e-mailka lagu wada xiriirayo) ay yeelan karto daldaloolo xagga amniga ah. Ilaalin buuxda oo xog ah oo ka dhan ah helitaanka dhinacyada saddexaad macquul ma ahan.
Hay'adda masuulka ka ah ka shaqaynta xogta boggan ayaa ah:
Telefoon: + 49 (0) 89 21 540 01 42
Hay'adda masuulka ahi waa qofka dabiiciga ah ama sharciga ah ee, keligiis ama si wadajir ah ula leh dadka kale, go'aan ka gaaraya ujeeddooyinka iyo hababka ka shaqeynta xogta shakhsiga ah (sida magacyada, cinwaanada emaylka, iwm.).
Hawlo badan oo ka baaraandegidda xogta ah ayaa suurtagal ah oo keliya oggolaanshahaaga degdegga ah. Waad ka noqon kartaa ogolaanshahaaga wakhti kasta. E-mayl aan rasmi ahayn ayaa noogu filan. Sharci ahaanta ka shaqeynta xogta la qabtay kahor burinta wali saameyn kuma yeelan dib u noqoshada.
Haddii ay dhacdo xadgudubyada ilaalinta xogta, qofka ay khusayso wuxuu xaq u leeyahay inuu cabasho u gudbiyo hay'adda kormeerka ee awoodda u leh. Masuulka kormeerka mas'uulka ka ah arimaha ilaalinta xogta waa sarkaalka ilaalinta xogta gobolka ee dowlada federaalka ee shirkadeenu ku taalo. Liiska saraakiisha ilaalinta xogta iyo faahfaahinta xiriirkooda waxaa laga heli karaa iskuxiraha soo socda: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .
Xuquuq u lahaanshaha xogta
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho xog aan si otomaatig ah ugu shaqeyno iyadoo ku saleysan ogolaanshahaaga ama fulinta heshiis laguu wareejiyay adiga ama cid saddexaad oo qaab guud ah, oo mashiin lagu akhrin karo ah. Haddii aad codsato in xogta si toos ah loogu wareejiyo qof kale oo mas'uul ah, tan waxaa la sameyn doonaa oo keliya haddii ay farsamo ahaan macquul tahay.
Kaydinta SSL ama TLS
Sababo nabadgelyo awgood iyo in la ilaaliyo gudbinta waxyaabaha qarsoodiga ah, sida amarrada ama weydiimaha aad noo soo dirto annaga oo ah hawl wadeenka goobta, boggan wuxuu adeegsadaa SSL ama. Qarsoodi TLS. Waad ku aqoonsan kartaa isku xirnaanta sirta ah xaqiiqda ah in cinwaanka cinwaanka biraawsarku uu ka beddelayo "http: //" illaa "https: //" iyo calaamadda qufulka ee khadka biraawsarkaaga. Haddii sirta SSL ama TLS la hawlgeliyo, xogta aad noo soo gudbiso ma aqrin karaan dhinacyada saddexaad.
Inta lagu gudajiro qodobada sharci ee khuseeya, waxaad xaq u leedahay inaad si bilaash ah uga hesho macluumaadkaaga shakhsiga ah ee aad keydisay, asal ahaan iyo cidda heleysa iyo ujeedada laga leeyahay ka shaqeynta xogta iyo haddii loo baahdo xaq u leedahay inaad saxdo, xanibto ama tirtirto xogtaan. Waxaad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta adreska ku qoran ogeysiiska sharciga ah haddii aad wax su'aalo dheeraad ah ka qabtid mowduuca xogta shaqsiyeed.
3. Xog ururin ku saabsan websaydhkayaga
Bogagga internetka qaarkood ayaa adeegsada waxa loogu yeero cookies. Kukiyada waxyeello uma geysato kombuyuutarkaaga kumana jiraan fayrasyo. Kukiyada waxay u adeegaan inay ka dhigaan dalabkeenna mid adeegsade-saaxiibtinimo badan, waxtar badan oo ammaan ah. Kukiyada waa faylal qoraal yar oo qoraal ah oo ku kaydsan kombuyuutarkaaga oo keydiya biraawsarkaaga. Kukiyada badan ee aan isticmaalno waxaa loogu yeeraa "cookies cookies". Si toos ah ayaa loo tirtiraa booqashadaada kadib. Kukiyada kale ayaa ku sii jiraya qalabkaaga illaa aad tirtirto. Kukiyadaani waxay noo suurtagelinayaan inaan aqoonsanno biraawsarkaaga marka xigta ee aad booqato. Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si lagugu wargaliyo ku saabsan dejinta cookies-ka oo kaliya u oggolaato cookies-ka kiisaska shaqsiyadeed, ka reebitaanka aqbalaadda cookies ee kiisaska qaarkood ama guud ahaan, oo aad dhaqaajiso tirtirka otomaatiga ah ee cookies markii aad xireyso biraawsarka. Haddii cookies-ka la demiyey, shaqeynta websaydhkan waa la xadidi karaa. Kukiyada looga baahan yahay inay fuliyaan habka isgaarsiinta elektiroonigga ah ama inaad siiso shaqooyin gaar ah oo aad u baahan tahay (tusaale ahaan shaqooyinka gaadhiga wax iibsiga) ayaa lagu kaydiyaa iyadoo lagu saleynayo Qod. 6 Para. 1 lit. f GDPR waa la keydiyey Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo lagu kaydiyo cookies-ka farsamo ahaan qalad-la’aan iyo bixinta adeegyadeeda. Haddii buskudyada kale (tusaale ahaan, buskudyada lagu falanqeeyo dabeecaddaada duufsiga) la keydiyo, kuwan si gooni ah ayaa loola dhaqmi doonaa bayaanka ilaalinta macluumaadka.
Bixiyaha websaydhku wuxuu si otomaatig ah u ururiyaa una kaydiyaa macluumaadka faylalka loo yaqaan 'server log files', kaas oo biraawsarkaagu si toos ah noogu soo gudbiyo. Kuwani waa: nooca biraawsarka iyo nooca biraawsarka, nidaamka hawlgalka ee la isticmaalay, tixraaca URL, magaca martigeliyaha kombiyuutarka marin u helidda, waqtiga codsiga serverka, cinwaanka IP, xogtan laguma darin ilaha xogta kale. Aasaaska howsha xog uruurinta waa Qod. 6 Para. 1 lit. f GDPR, oo u oggolaanaysa ka shaqeynta xogta waxqabadka qandaraaska ama tallaabooyinka qandaraaska kahor.
4. Qalabka falanqaynta iyo xayeysiinta
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa shaqooyinka adeegga falanqaynta websaydhka Google Analytics. Bixiyaha waa Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics waxay isticmaashaa waxa loogu yeero "cookies". Kuwani waa feylal qoraal ah oo ku kaydsan kombuyuutarkaaga oo awood u siinaya isticmaalkaaga bogga in lagu falanqeeyo. Macluumaadka ay soo saartay cookie ee ku saabsan isticmaalka degelkan waxaa badanaa loo wareejiyaa server-ka Google ee ku yaal Mareykanka oo halkaas lagu kaydiyaa. Kaydinta kukiyada Google Analytics waxay ku saleysan tahay Qod. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo lagu falanqeeyo dabeecadaha isticmaalaha si loo wanaajiyo websaydhkiisa iyo xayeysiiskiisaba.
Waxaan ku hawlgalnay hawsha qarsoodiga IP-ka websaydhkan. Natiijo ahaan, cinwaankaaga IP waxaa soo gaabin doona Google gudaheeda wadamada xubnaha ka ah Midowga Yurub ama dowladaha kale ee qandaraaska la galaya heshiiska ku saabsan Aagga Dhaqaalaha Yurub ka hor inta aan loo gudbin USA. Cinwaanka IP-ga oo buuxa waxaa kaliya loogu gudbiyaa adeegaha Google ee USA waxaana lagu soo gaabiyey halkaas xaalado aan caadi ahayn. Aniga oo ku hadlaya magaca hawl wadeenka degelkan, Google waxay u adeegsan doontaa macluumaadkan si ay u qiimeyso isticmaalkaaga websaydhka, si ay u soo uruuriso warbixinnada ku saabsan waxqabadka websaydhka iyo inay u siiso hawl wadeenka websaydhada adeegyo kale oo la xidhiidha waxqabadka websaydhka iyo isticmaalka internetka. Cinwaanka IP-ga ee uu gudbiyo biraawsarkaaga oo qayb ka ah Google Analytics laguma biiri doono xogta kale ee Google.
Waad ka hortagi kartaa keydinta buskudka adigoo dejinaya softiweerka biraawsarkaaga si waafaqsan; si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaanno in xaaladdan laga yaabo inaadan awoodin inaad isticmaasho dhammaan howlaha websaydhkan illaa inta ay ka buuxaan. Waxaad sidoo kale ka hortagi kartaa Google inuu ururiyo xogta ay soo saartay cookie-ka iyo la xiriirta isticmaalkaaga websaydhka (oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP-ga) iyo inuu ka baaraandego xogtan Google adoo soo degsanaya furaha furaha ee laga heli karo bogga soo socda oo rakib: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Waad ka hortagi kartaa Google Analytics inay ururiso xogtaada adoo gujinaya xiriirka soo socda. Waxaa la dejin doonaa buskudka ka-baxsiga kaas oo ka hortagaya ururinta xogtaada booqashooyinka mustaqbalka ee degelkan : Deactivate Google Analytics . Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan maaraynta xogta isticmaalaha Google Analytics ee ku jirta bayaanka ilaalinta xogta Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .